Muxuu ahaa heshiiska ay kala saxiixdeen Jabuuti iyo Somaliland? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Muxuu ahaa heshiiska ay kala saxiixdeen Jabuuti iyo Somaliland?
Muxuu ahaa heshiiska ay kala saxiixdeen Jabuuti iyo Somaliland?
Heshiiska ay maanta kala saxiixdeen Jabuuti iyo Somaliland
Jabuuti (Halqaran.com) – Jamhuuriyadda Jabuuti iyo Somaliland ayaa Axadda maanta ah kala saxiixday heshiis dhanka amniga ah gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero aragagixisada iyo isku gudbinta dambiilayaasha maadama ay xudduud wadaagaan.
Heshiiskan ayaa waxaa labada dhinaca u kala saxeexay taliyeyaasha booliska Somaliland iyo Jabuuti, waxaana goob joog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti Muumin Axmed Sheekh.
Dowladda Jabuuti ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga Ciidamo farabadan, oo ku howlgalla magaca AMISOM, kuwaas oo ku sugan inta badan degmoyinka Gobolka Hiiraan ee Maamulka Hirshabeelle.
Si kastaba, Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa dhowr jeer heshiisyo isugu jira, Ganacsi iyo Amni waxaa ay la saxiixatay Somaliland, iyaga oo sidoo kale casuumay Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
Heshiiska Jabuuti iyo Somaliland